Yese mari yekudyara iwe yaunogona kuhaya | Ehupfumi Zvemari
Mari yekudyara yave imwe yezvigadzirwa zvemari yakakurumbira uri kupi iwe monetize mari. Hazvishamisi kuti ivo havana kuumbwa senge imwechete kana homogeneous yekuchengetedza modhi. Asi zvinopesana, inovandudzwa pasi pemakona akasiyana aunogona kusarudza kukwidziridza chirevo chako chemari gore rega. Kubva ku equities kuenda kune yakamisirwa mari, asi pasina kukanganwa imwe nzira kana kunyange mhinduro dzemari kana ichi chiri chako chishuwo. Imwe yemabhenefiti ayo akakura pane mamwe mafomati ekudyara ndiwo mikana yakawanda yainokupa iwe kuti uwane kudzoka kwakakodzera pane zvako wega kana zvemhuri nhumbi.
Kubva pane ino mamiriro ese, hapana zvirinani pane kuziva kuti ndeipi mari yekudyara iwe yauinayo panguva ino. Saka kuti iwe ugone kuongorora uye kuvashandira zvichienderana neprofile iwe yaunounza sediki uye wepakati investor. Uchanyatsoona kuti ndizvo mari yakawanda kupfuura yawaifungidzira kubva pakutanga. Kunyangwe kubva pazvinhu zvine hunyanzvi zvakanyanya kusvika kune zvinonakidza kudzivirira zvaunofarira chero nguva. Ehezve, iwe hauzoshayikwa mamodheru kuti usvike pane chaiyo sarudzo maererano nemamiriro chaiwo emisika yemari.
Chero zvazvingaitika, panguva ino unogona kuona akasiyana siyana mamiriro kudyara kwehunhu hwese nemamiriro. Pasina kana kubvisirwa panguva yekuhaya. Kunyangwe zvichinyanya kuoma kuverenga kuti ndeipi mari yakanakisa sezvo iri dudziro yekuzviisa pasi pachayo kubva pachimiro icho chinopihwa nemumwe nemumwe wevashambadzi vadiki nepakati Inogona kumiririrwa iwe neavo vakavakirwa pamari, nepo kune mumwe mushandisi ivo vari izvo zvine zvikamu zvezvikamu zvavo zvekudyara zvisungo zvinomiririra zvemari yepasirose yakagadziriswa.
1 Investment fund makirasi
2 Yakavimbiswa: mashoma mashandiro
3 Nzira yekugadzirisa mari
4 Zviratidzo zveizvi zvigadzirwa
5 Nzira dzakasiyana dzekudyara
Investment fund makirasi
Kutanga, iwe unozofanirwa kuwona kupatsanurwa kweizvi zvigadzirwa zvemari. Yakakura kwazvo zvekuti iwe unogona kugadzira kubva panguva dzino rimwe dambudziko mukusarudza kwako. Rondedzero yemari idzi inovhara nzira dzakasiyana dzekudyara mari kubva ikozvino. Pakati peavo vanomira pane mari, mari yakatarwa, musiyano, musanganiswa, wepasi rose uye muhomwe yemari. Kune rimwe divi, kune zvakare zvidimbu mukati meiyi nzira. Semuenzaniso, mune yakasanganiswa iyo inogona kuunganidza avo vanozvidzivirira, vane hasha, vane mwero, vanoshanduka kana kunyange zvinoenderana neako manejimendi: zvinhu kana zvikwereti.
Hapana ari nani kana akaipa kupfuura mumwe. Asi pane zvinopesana vanovimba ne mamiriro anounzwa nemisika yemari nguva dzese. Kuparadzanisa - zveshuwa - kubva kuprofile iwe yaunounza sewe investor: zvine mwero, zvehasha kana zvepakati. Une mari zhinji dzekudyara zvekuti haugone kuvhara zvirevo zvese nemaneja. Izvo zvazviri ndezvekuti iwe unovatsigira kubva zvino zvichienda mberi. Ichave imwe yeanonyanya kuita marongero ekusiyanisa kuchengetedza kubva munzira inoshanda inodzivirira zvaunofarira sevashandisi.
Yakavimbiswa: mashoma mashandiro
Kune zvekare chimwe chikamu icho chinonzi unovimbiswa. Mari idzi dzinovimbisa iwe a shoma purofiti uye inogadziriswa gore rega rega. Zvinogona kunge zvisiri kudzvanyirira zvishuwo zvako, asi zvirinani kuti iwe unowana yakadzoserwa kudzoka gore rega rega pakati pe3% uye 5% angangoita. Kubva pamatanho aya iwe unozokwanisa kudarika chiyero chemubereko chavanokupa, chero mamiriro ezvinhu akaderera asina kusangana mune zvese zviitiko. Icho chigadzirwa chinodikanwa nevamwe vashoma uye varipakati varimari vanoda kupa hukuru chengetedzo kune avo ehupfumi mipiro. Asi chero zvakadaro, vanokudzivirira kubva mukugona kuwana yakanakisa kudzoka iyo inogadzirwa kubva kumisika yemari.
Ivo vanoshanda kunyorera imwe kirasi yemasuwo ekudyara. Uye izvo izvo zvakagadzirirwa kune yakanyatso tsanangurwa mutengi chimiro. Kupi kuchengeteka kunokurira pamusoro pedzimwe nzira dzekudyara. Nekudaro, ivo vanokwanisa kukuganhura kubva pakuva muchinzvimbo chekutora mukana weakanaka mamiriro emamiriro emusika wemari. Chero iyo yemari nhumbi iyo yako yekudyara portfolio inogadzirwa nayo. Nekuti zvirizvo, mari inovimbiswa inoreva kune ese akasarudzika uye akasiyana emari zvinongedzo. Kunyangwe kubva kune mamwe mamodheru mune ayo manejimendi. Chero zvazvingaitika, ichave imwe nzira nyowani yekuita kuti mari yako ichengetwe kubva ikozvino.
Nzira yekugadzirisa mari
Imwe yemhando dzakasiyana umo izvi zvigadzirwa zvemari zvinogona kusiyaniswa ndeye yavo manejimendi modhi. Mupfungwa iyi, pfungwa inonakidza ndeyeyemari yemunyori, inova iyo maneja ane rusununguko rwakawanda pakuita mari, mutemo wekudyara wakasununguka. Kunyangwe musiyano mukuru urimo mune anoshanda uye mapusa mafomati. Nekuremekedza kune zvekare, ivo vanoonekwa nevatariri vacho vari kuvandudza ivo zvichienderana nemamiriro emusika. Uye kuti panguva imwe neimwe inogona kuve yakasiyana zvakanyanya. Icho chimwe chigadzirwa che kugadzirisa kuita, kunyangwe kubva pazviitiko zvakashata zvemisika yemari.
Ipo ichichengetedzwa nemazvo mari, kune rimwe divi, ivo vanonyanya kumira. Sezvo ivo vachisimudzwa uye kuvandudzwa vane zvinotsanangurwa chaizvo zvinangwa kubva pakutanga. Izvo izvo iwe zvausingakwanise kutsauka kana iwe usiri kuda kubva kure nenzira dzako dzepakutanga. Ndiyo mari yakajairika yaungawana kuburikidza nechipo chiripo. Mune mafomati ese ekudyara aripo. Kubva pane yakachengetedzeka manejimendi kune imwe iyo inosiyaniswa nenjodzi huru yekuti mashandiro avo anosanganisira chero nguva.
Zviratidzo zveizvi zvigadzirwa
Chero zvazvingaitika, uye kune vese zvavo pane zvimwe zvinongedzo zvinofanirwa kutarisirwa kubva izvozvi zvichienda mberi. Kwete pasina, iyo chete mari yekudyara Inogona kuve nemakirasi akasiyana zvichienderana nemakomisheni, mari, mashoma ekudyara ... Ichi chinhu chinoratidzira chero mari yekudyara, zvisinei nehunhu hwayo. Usakanganwe izvi kana iwe usiri kuda kukanganisa izvo zvinogona kukubhadharira zvakanyanya kubva ikozvino. Nezve makomisheni, anogona kuve emhando dzakasiyana siyana: dhipoziti, manejimendi, kudzoreredza, nezvimwe. Asi usatya nekuti hazvisi zvese zvinozadziswa panguva imwe chete. Chero zvazvingaitika, iwe unogona kuve wakakura kupfuura kutenga nekutengesa masheya pamusika wekutengesa.
Chero zvazvingaitika, imwe yemabhenefiti makuru emari yekudyara ndeyekuti anoenderana nedzimba dzese. Kubva pamipiro mishoma kubva makumi matatu euros. Kunyangwe paine mamwe mafomati ayo ari kunyanya kudiwa zvakanyanya kana uchisimudza izvi zviyero zvinosvika zviuru zvishanu kana kunyangwe zviuru gumi zveeuro. Kune rimwe divi, iwe unogona zvakare kupihwa chibvumirano mumari dzemuno kana kune dzimwe dzinoda shanduko yaunofanirwa kufunga kuburikidza nemamwe makomisheni ayo pasina mubvunzo achaita kuti basa riwedzere kudhura. Naizvozvo, iwe uchafanirwa kutarisa kana kuvhiya kwacho kuchizobatsira iwe.
Nzira dzakasiyana dzekudyara
Izvo hazvigone kukanganikwa chero kuti izvi zvigadzirwa zvemari unogona kuwana zvimwe zvimwe zvakaomesesa zvakasiyana. Ehezve izvi ndozvinoitika kana tikazviwana tiine mari ye kukosha kwemari, kukura kana kusanganisa zvichienderana nezano rekudyara ravanosarudza. Izvo zvakanyanya kuomarara kune yako yekupedzisira kunyorera, asi kune rimwe divi, inogona kusimudzira kufarira gore rega. Iwe unofanirwa kugovana izvi zvinangwa maererano nekusimudzira kwechirongwa icho chavakaitwa. Nekuti ivo vanopa akasiana-siyana akasiyana ekudyara mamodheru, uko zvingave zvakajairika kuti iwe upe hukuru hwemari tsika kuitira kuti iwe ugone kushanda navo pamwe neakakura vimbiso yebudiriro. Usakanganwe kana iwe uchida kukwidziridza mashandiro kubva zvino zvichienda mberi.
Kune rimwe divi, mari ne mugove wekugovera. Saka kuti nenzira iyi, iwe unogona kuve neyakagadziriswa kudzoka gore rega. Izvo hazvisi chete zvinokanganisa kusiana kwemari mutual mari, asi zvakare yakagadziriswa iwo. Nebatsiro regore rega iro rinogona kusvika pamatanho e5%. Mune ino kesi, iwe uchafanirwa kufunga kana zvakakodzera kubhadhara mune aya manejimendi mamodheru. Nekuti haufanire kungotongwa nemubhadharo wavanokupa gore rega rega, asi nemamwe maparamende akakosha chaizvo. Chero zvazvingaitika, havasi ivo vazhinji mune iriko chipo chinogadzirwa neiyi yakakosha musika wekudyara.
Mari ye Mhedziso kudzoka Ndiyo imwe yemaitiro aunogona kuwana panguva ino. Icho chimwe cheanonyanya kuzivikanwa pane ese uye chinowanzoitika kuenda kune manejimendi mune kusevha. Mune dzimwe nguva muhupenyu hwako vanogona kuve vanobatsira kwazvo pane zvese. Kusvika pakuti iyo iri modality iri kuwedzera kufurirwa nemakambani manejimendi. Chekupedzisira, kune zvekare maSICAV ayo anoitirwa kuitisa zvinoda mushandisi mushandisi uye mairi havazi vese vadiki nepakati varimi vanogona kunyorera. Vachada rumwe ruzivo runotsanangura mashandiro aro uye kuumbwa kwenzvimbo dzavo dzekudyara. Saka kuti iwe ugosvika pamhedziso yekuti mari yekudyara chigadzirwa chakaomarara kupfuura zvaungafunge pakutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Mari dzese dzekudyara dzaunogona kuhaya